Uncategorized – myanmar news
သမိုင္​းဝင္​ပုဂံ​ေရႊစံ​ေတာ္​ဘုရား​ ဒုတိယအဆင္​့​ေပၚတက္​၍​ေယာကၡမ အိမ္​ကဲ့သို႔.ပန္​းျခံကဲ့သို႔..တည္​းခိုခန္​းကဲ့သို႔
(​ေတာ္​သလင္​းဇာတ္​စခင္​းကာစ..မ႐ိုက္​ျဖစ္​လိုက္​တဲ့ပံု​ေတြကအာ့ထက္​ၾကည္​့ရအင္​မတန္​ဆိုးပါ​ေၾကာင္​း)…ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳး တေရာက္ဆုိတာ မေန႔က်ပါနဲ႔
စကား ​ေတြၾကမ္​းမယ္​ဗ်ာ ၾကမ္​းမွလည္​းတန္​ကာက်​ေတာ့မွာမို႔ပါ ။နည္းနည္းေတာ့႐ိုင္းမယ္..နားလည္ေပးပါမ်ားမ်ား႐ွယ္​​ေပးၾကပါဗ်ာ)
မူစတာဖာ​ေတြရဲ႕ sex page​ေတြမွာ​ေတြ႔လိုက္​ရတဲ့ ဘုရားဝန္​းထဲမွာ ​ေလးဘက္​ကုန္​းလိင္​ဆက္​ဆံ​ေနတဲ့အတြဲကို ​ေျပာခ်င္​လို႔ပါ။
ဗုဒၶ ဘာသာျမန္​မာႏိုင္​ငံ​ေတာ္​မွာ ​ေနထိုင္​တဲ့ျမန္​မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ပုတုဇဥ္​ျဖစ္​လို႔ ကာမဆႏၵကိုမကင္​းႏိုင္​ပါဘူး အမ်ိဳးသားမ်ားမွလည္​း ယီးပါသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္​း စပပါပါတယ္​
အာ့​ေတာ့ ​ေခတ္​စကားနဲ႔​ေျပာရင္​စြပ္​တယ္​​ေပါ့ဗ်ာ စြပ္​တယ္​ဆိုရင္​လည္​း ဘိအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ စြပ္​ၾကပါတယ္​
ျခံဳတိုး တည္​းခိုခန္​း hotel လြတ္​လပ္​တဲ့အိမ္​ အမ်ိဳးမ်ိဳး​ေသာစြပ္​ဘိ​ေတြမွာစြပ္​လို႔ရပါတယ္​ ။
စြပ္​နည္​းအမ်ိဳးမ်ိဳး​ေတြအနက္​မွာ ​ေလးဘက္​ကုန္​းစြပ္​နည္​းဆိုတာ အမွန္​တကယ္​လြတ္​လပ္​တဲ့​ေနရာမ်ားမွာမွ
အဆင္​​ေျပပါတယ္​ ​ေတာ္​ရံုျခံဳတိုးတဲ့အဆင္​့နဲ႔​ေတာ့​ေလးဘက္​ကုန္​းလို႔မရပါဘူး ။
လူတိုင္​းနီးပါ အထြတ္​အျမတ္​ထားတဲ့ဘုရားရင္​ျပင္​​ေပၚမွာ ​ေလးဘက္​ကုန္​းၿပီးအားရပါးရယ္ိုးၾကခံၾက​ေန​ေတာ့
အခန္​းခ​ေလး​ေတာင္​မ႐ွိတဲ့ ​ေဆာက္​႐ုပ္​မ​ေပါက္​တဲ့​ေခြးသား​ေတြကို ဘာၾကည္​့ၿပီးတြဲတာလဲ
ဟို​ေခြးသားကလည္​း ယိုးဖို႔အခန္​းခမ႐ွိလဲျခံုထဲသြားၾက​ေလ ဘုရား​ေပၚက ​ေ႐ွာ့ဘိလို႔သတ္​မွတ္​ထားလား
တျခားဘာသာ​ေတြလိုက္​ၾကည္​့ ဗလီ ဘုရား​ေက်ာင္​း
ခုဟာက ခင္​ဗ်ားတို႔က ​ေဆာက္​ရမ္​းပဲ့လြန္​းတယ္​
အခုကိစၥကို ဘာသာသာသနာအတြက္​​ေ႐ွ႕​ေဆာင္​လမ္​းျပလုပ္​​ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္​း​ေတြမ်ားမ်ွား႐ွယ္​​ေပး​ေစလိုပါတယ္​ copyလည္​းဆြဲၾကပါ ခြက္​ဒစ္​မလိုပါဘူး
အခုတင္​တဲ့post​ေၾကာင္​့ ခင္​ဗ်ားတို႔​ေခါင္​းထဲမာအသိတရားတစ္​ခုရရင္​ ​ေက်နပ္​ပါတယ္
သမိုင်​းဝင်​ပုဂံ​ရွှေစံ​တော်​ဘုရား​ ဒုတိယအဆင်​့​ပေါ်တက်​၍​ယောက္ခမ အိမ်​ကဲ့သို့.ပန်​းခြံကဲ့သို့..တည်​းခိုခန်​းကဲ့သို့
(​တော်​သလင်​းဇာတ်​စခင်​းကာစ..မရိုက်​ဖြစ်​လိုက်​တဲ့ပုံ​တွေကအာ့ထက်​ကြည်​့ရအင်​မတန်​ဆိုးပါ​ကြောင်​း)…ကိုယ်ကိုကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုး တရောက်ဆိုတာ မနေ့ကျပါနဲ့
စကား ​တွေကြမ်​းမယ်​ဗျာ ကြမ်​းမှလည်​းတန်​ကာကျ​တော့မှာမို့ပါ ။နည်းနည်းတော့ရိုင်းမယ်..နားလည်ပေးပါများများရှယ်​​ပေးကြပါဗျာ)
မူစတာဖာ​တွေရဲ့ sex page​တွေမှာ​တွေ့လိုက်​ရတဲ့ ဘုရားဝန်​းထဲမှာ ​လေးဘက်​ကုန်​းလိင်​ဆက်​ဆံ​နေတဲ့အတွဲကို ​ပြောချင်​လို့ပါ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာမြန်​မာနိုင်​ငံ​တော်​မှာ ​နေထိုင်​တဲ့မြန်​မာလူမျိုးများဟာ ပုတုဇဉ်​ဖြစ်​လို့ ကာမဆန္ဒကိုမကင်​းနိုင်​ပါဘူး အမျိုးသားများမှလည်​း ယီးပါသလို အမျိုးသမီးများကလည်​း စပပါပါတယ်​
အာ့​တော့ ​ခေတ်​စကားနဲ့​ပြောရင်​စွပ်​တယ်​​ပေါ့ဗျာ စွပ်​တယ်​ဆိုရင်​လည်​း ဘိအမျိုးမျိုးမှာ စွပ်​ကြပါတယ်​
ခြုံတိုး တည်​းခိုခန်​း hotel လွတ်​လပ်​တဲ့အိမ်​ အမျိုးမျိုး​သောစွပ်​ဘိ​တွေမှာစွပ်​လို့ရပါတယ်​ ။
စွပ်​နည်​းအမျိုးမျိုး​တွေအနက်​မှာ ​လေးဘက်​ကုန်​းစွပ်​နည်​းဆိုတာ အမှန်​တကယ်​လွတ်​လပ်​တဲ့​နေရာများမှာမှ
အဆင်​​ပြေပါတယ်​ ​တော်​ရုံခြုံတိုးတဲ့အဆင်​့နဲ့​တော့​လေးဘက်​ကုန်​းလို့မရပါဘူး ။
လူတိုင်​းနီးပါ အထွတ်​အမြတ်​ထားတဲ့ဘုရားရင်​ပြင်​​ပေါ်မှာ ​လေးဘက်​ကုန်​းပြီးအားရပါးရယ်ိုးကြခံကြ​နေ​တော့
အခန်​းခ​လေး​တောင်​မရှိတဲ့ ​ဆောက်​ရုပ်​မ​ပေါက်​တဲ့​ခွေးသား​တွေကို ဘာကြည်​့ပြီးတွဲတာလဲ
ဟို​ခွေးသားကလည်​း ယိုးဖို့အခန်​းခမရှိလဲခြုံထဲသွားကြ​လေ ဘုရား​ပေါ်က ​ရှော့ဘိလို့သတ်​မှတ်​ထားလား
တခြားဘာသာ​တွေလိုက်​ကြည်​့ ဗလီ ဘုရား​ကျောင်​း
ခုဟာက ခင်​ဗျားတို့က ​ဆောက်​ရမ်​းပဲ့လွန်​းတယ်​
အခုကိစ္စကို ဘာသာသာသနာအတွက်​​ရှေ့​ဆောင်​လမ်​းပြလုပ်​​နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်​း​တွေများမျှားရှယ်​​ပေး​စေလိုပါတယ်​ copyလည်​းဆွဲကြပါ ခွက်​ဒစ်​မလိုပါဘူး
အခုတင်​တဲ့post​ကြောင်​့ ခင်​ဗျားတို့​ခေါင်​းထဲမာအသိတရားတစ်​ခုရရင်​ ​ကျေနပ်​ပါတယ်
Author admin 1Posted on March 17, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ဘုရားကို..​ေယာကၡမအိမ္​ထင္​​ေနၾကတဲ့.မိမဆံုးမဖမဆံုးမမ်ား.(မိဘနဲ႔မဆိုင္​မွန္​းသိတယ္​တမင္​ကို​ေရးတာ.)
မိန္းမေကာင္းတို႔၏ အဂၤါ ၈ ပါး
(၁)ထမင္းစားေသာအခါ မိခင္ကဲ႔သို ့လုပ္ေက်ြးေသာမိန္းမ။
(၃)ေဘးအႏၲရာယ္ၾကဳံေသာအခါ တိုင္ပင္၍ ရေသာမိန္းမ။
(၄)”က်ြန္” မကဲ႔သို ့လုပ္ေက်ြးတက္ေသာမိန္းမ။
(၅)လင္သားကို ေမာင္ကဲ႔သို ့ရွက္ေၾကာက္ရုိေသေလးစားတက္ေသာမိန္းမ။
၁။ လူေရွ႕သူေရွ႕ မေရွာင္ အိမ္ေထာက္ဘက္ကို အျပစ္တင္ျခင္း
အိမ္ေထာင္သက္ ရလာတာနဲ႔ အမ်ွ အထစ္အေငွာ့ေလးေတာ့ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ လူေရွ႕သူေရွ႕ မေရွာင္ တဘက္သားကိုအျပစ္တင္ ရန္ေထာင္ရင္ေတာ့ ရန္ပြဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ အဲလိုရန္ျဖစ္တာ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္း ႏို္င္တဲ့ အျပင္မီးလွ်ံထဲကို ဓါတ္ဆီ ေလာင္းလိုက္သလို ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးက်ရင္ ဘယ္သူမွ အေလွ်ာ့ ေပးလို႔ မရတဲ့ အေနအထား ေရာက္သြားတတ္ၿပီး ပြဲသိမ္းဖို႔ ခက္ခဲသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္မို႔လို႔ လင္မယား မွတ္ထားရ မွာက
မည္သူရဲ႕ေရွ႕မွာမဆို အိမ္ေထာက္ဘက္ကို အျပစ္တင္မိတာမ်ဳိး လံုး၀ေရွာင္ၾကင္ပါ။ လက္၀ါးတဘက္ ထဲ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခုတ္တီးလို႔ မရပါဘူး။
၂။ သားသမီး ေရွ႕မွာ ရန္ျဖစ္ျခင္း
မိဘဆိုတာ သားသမီး ရဲ႕ အားကိုးရာ ျဖစ္သလိုခုိလံုရာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ျပႆနာ တစ္ခုခု ရိွခဲ့ရင္ သားသမီးကို ေရွာင္ပါ။လင္မယား
ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူႀကီး ႏွစ္ဦးရဲ႕ ကိစၥပါ။မိဘရန္ျဖစ္တာကို ကေလးေတြ ေတြ႕သြားရင္ ကေလးရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို ထိခုိက္သြားႏိုင္သလို သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အိမ္ေထာင္ေရး
အေပၚထားရိွတဲ့ စိတ္ထား ကိုပါထိခုိက္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သားသမီးမ်ားဟာအိမ္မွာ
သာယာတဲ့ အရသာကို မခံစားရဘူးဆိုရင္ေနာင္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။
၃။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနမေကာင္းတဲ့အခါ ရန္ျဖစ္ျခင္း
အိမ္ေထာင္ဘက္ တစ္ဦးဦးက နာမက်န္းျဖစ္ေနရင္စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး
စိတ္္ဆိုးလြယ္တတ္ေလ့ရိွပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရန္ျဖစ္မိရင္ အိမ္ေထာင္ေရးကိုလံုး၀ထိခုိက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
၄။ အနာေဟာင္း ျပန္ေဖာ္ျခင္း
ရန္ျဖစ္တိုင္း အနာေဟာင္းကို ျပန္ေဖာ္တာမ်ဳိးလံုး၀ေရွာင္ၾကင္သင့္ပါတယ္။ မမွားတဲ့ေရွ႕ေန မေသတဲ့ေဆးသမားဆိုသလို လူတိုင္းကိုယ္စီ တစ္ခုခု မွား ဖူးတတ္ၾကစၿမဲပါ။အနာေဟာင္းကို
လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ ခဏခဏထုတ္သံုးရင္ေတာ့ အဲဒီအိမ္ေထာင္ေရးျပန္အဆင္ေျပဖို႔ ခက္ခဲသြားတတ္ပါတယ္။
၅။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ၏ မိဘနဲ႔ အိမ္သားမ်ားကိုထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား
ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တစ္ခုခုအေပၚ မေက်နပ္လို႔ သေဘာမတူႏုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥအေပၚသာ အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္သင့္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕ မိဘနဲ႔ မိသားစု ကို
ေစာင္းေျပာတာမ်ဳိး၊ထိခိုက္ေစတဲ့ စကားမ်ဳိး လံုး၀ေရွာင္ၾကင္ရမွာပါ။
၆။ ပစၥည္းလြင့္ပစ္တတ္တဲ့ အက်င့္
ရန္ျဖစ္ၿပီဆိုမွ နဂိုကတည္းက အသံကက်ယ္ေလွာင္ၿပီးသား၊ ပစၥည္းလြင့္ပစ္တဲ့ အသံ၊ ခုန္ထု တဲ့အသံ၊ ပစၥည္းက်ကြဲသြားတဲ့အသံ ေတြနဲ႔ ေရာသြားရင္ ပြဲအမ်ားႀကီး
ပိုၾကမ္းသြားတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္လို႔ယူထားၾကတာပဲ၊ပစၥည္းလြင့္ပစ္လို႔ က်ကြဲတယ္ဆိုတာ ႏွလံုးသားက် ကြဲတာနဲ႕တူတတ္ပါတယ္။
၇။ စိတ္နာေစတဲ့ စကားအသံုးအႏူန္းမ်ား
စိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္လို႔ ရတယ္။ စိတ္နာေအာင္မလုပ္ၾကပါနဲ႕၊စိတ္နာေစတဲ့ စကားမ်ဳိး လံုး၀ေရွာင္ၾကင္သင့္ပါတယ္။ “ ရွင္ကိုအားကိုးလို႔ေတာ့ သူေတာင္းစားပဲျဖစ္သြားမွာ၊
သူမ်ားေယာ့က်ၤားေတြၾကည့္ ပိုက္ဆံရွာဘယ္ေလာက္ေတာ္လဲ၊ရွင္နဲ႕တစ္ စက္ကေလးမွ မတူဘူး ”စတဲ့စကားမ်ဳိး ကို မေျပာဆိုရပါ။
၈။ ေသတာနဲ႕ ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္း
ငါအသက္ရွင္ေနတာ ဘာထူးေသးလဲ၊ငါအသက္မရွင္ခ်င္ေတာ့ဘူး ၊ ငါမင္းကို ေသျပမယ္စသည္ျဖင့္ ေသတာနဲ႔ ခ်ိန္းေျခာက္ တာမ်ဳိးလံုး၀ေရွာင္ၾကင္သင့္ပါတယ္။
၉။ လက္ပါ ျခင္း
ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဆိုးစိတ္ဆိုး ကိုယ့္လက္ ကိုလံုး၀ ထိန္းထားရပါမယ္။
တစ္ခ်က္ရိုက္မိသြားရင္ခ်စ္ခဲ့သမ်ွ အတိုးေရာ အရင္းပါ ဆံုးရံူးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ပ ဒဏ္ရာ ကုစားရ လြယ္သေလာက္ စိတ္တြင္းက ဒဏ္ရာကို ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔ မလြယ္လွပါ။
၁၀။ ကြဲမယ္ ဆိုတဲ့စကား အလြယ္တကူသံုးျခင္း
ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဆိုးတဲ့ အခါ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုတဲ့စိတ္ မ်ဳိး ၀င္တတ္ပါတယ္။ ကြဲမယ္ဆိုတဲ့ စကားဟာ အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ရန္မျဖစ္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ အခ်စ္ဆိုတာဟာ အိမ္ေထာင္သက္ ၾကာလာတာနဲ႔ အမ်ွရင္ခုန္တာေတြ ဓါတ္လိုက္တာေတြ
တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမဲ့ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ဆက္ၿပီးတန္ဖိုးထားေနေသးျခင္းကို ဆိုလိုပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
#အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္း ခိုင္ျမဲေအာင္
၁။ အျပန္အလွန္ ေလးစားပါ
ခင္ပြန္းကလည္း ဇနီးျဖစ္သူကို ေလးစားပါ။ ဇနီးကလည္း ခင္ပြန္းကို ေလးစားပါ။ ထိုသို႔
အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္းေရး အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ဆိုလည္း မွားမယ္ မထင္ပါ။
ဘာမွ မဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလာက္ကိုပင္ မယံုမၾကည္ မေတြးသင့္ပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မူ ထားရိွျခင္းအားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ခင္ပြန္း အတြက္ ဇနီးသည္က အနစ္နာခံ သလို ဇနီးအတြက္လည္း ခင္ပြန္းက အနစ္နာ
ခံေပးပါ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ ဘယ္သူ သာတယ္ ဘယ္သူ နာတယ္လို႔ ေတြးေတာေနရင္ေတာ့ မေကာင္းပါ။
၄။ မိမိတာဝန္ မိမိေက်ပြန္ပါေစ
ခင္ပြန္းမွာလည္း ခင္ပြန္း တာဝန္ယူထားတဲ့ တာဝန္ ရိွသလို ဇနီးမွာလည္း ဇနီးသည္
တာဝန္ယူတဲ့ ကိစၥ တာဝန္ေတြ ရိွၾကပါတယ္။ ထိုတာဝန္ေတြကို နွစ္ေယာက္လံုး ေက်ပြန္ၾကပါေစ။
၅။ ေမတၱာစစ္နဲ႔ ခ်စ္ပါ
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေပၚ ခ်စ္မွသာ
အိမ္ေထာင္ေရးက ေရရွည္ခိုင္ျမဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိသို႔ မဟုတ္ဘဲ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ မရိွတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုတာ ေရရွည္ခိုင္ျမဲဖို႔ဆိုတာခက္ခဲပါတယ္။
သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီးထံမှာ ဒီအချက် ၈ ချက် ရှိနေရင် သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်
မိန်းမကောင်းတို့၏ အင်္ဂါ ၈ ပါး
(၁)ထမင်းစားသောအခါ မိခင်ကဲ့သို ့လုပ်ကျေွးသောမိန်းမ။
(၃)ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသောအခါ တိုင်ပင်၍ ရသောမိန်းမ။
(၄)”ကျွန်” မကဲ့သို ့လုပ်ကျေွးတက်သောမိန်းမ။
(၅)လင်သားကို မောင်ကဲ့သို ့ရှက်ကြောက်ရိုသေလေးစားတက်သောမိန်းမ။
၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း
အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကိုအပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နို်င်တဲ့ အပြင်မီးလျှံထဲကို ဓါတ်ဆီ လောင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးကျရင် ဘယ်သူမှ အလျှော့ ပေးလို့ မရတဲ့ အနေအထား ရောက်သွားတတ်ပြီး ပွဲသိမ်းဖို့ ခက်ခဲသွားပါတယ်။ ဒါကြောင်မို့လို့ လင်မယား မှတ်ထားရ မှာက
မည်သူရဲ့ရှေ့မှာမဆို အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်မိတာမျိုး လုံး၀ရှောင်ကြင်ပါ။ လက်ဝါးတဘက် ထဲ ဘယ်တော့မှ လက်ခုတ်တီးလို့ မရပါဘူး။
၂။ သားသမီး ရှေ့မှာ ရန်ဖြစ်ခြင်း
မိဘဆိုတာ သားသမီး ရဲ့ အားကိုးရာ ဖြစ်သလိုခိုလုံရာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိခဲ့ရင် သားသမီးကို ရှောင်ပါ။လင်မယား
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူကြီး နှစ်ဦးရဲ့ ကိစ္စပါ။မိဘရန်ဖြစ်တာကို ကလေးတွေ တွေ့သွားရင် ကလေးရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ထိခိုက်သွားနိုင်သလို သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်အိမ်ထောင်ရေး
အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ထား ကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သားသမီးများဟာအိမ်မှာ
သာယာတဲ့ အရသာကို မခံစားရဘူးဆိုရင်နောင်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ အိမ်ထောင်ဘက် နေမကောင်းတဲ့အခါ ရန်ဖြစ်ခြင်း
အိမ်ထောင်ဘက် တစ်ဦးဦးက နာမကျန်းဖြစ်နေရင်စိတ်ဓါတ်ကျပြီး
စိတ််ဆိုးလွယ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ရန်ဖြစ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေးကိုလုံး၀ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။
၄။ အနာဟောင်း ပြန်ဖော်ခြင်း
ရန်ဖြစ်တိုင်း အနာဟောင်းကို ပြန်ဖော်တာမျိုးလုံး၀ရှောင်ကြင်သင့်ပါတယ်။ မမှားတဲ့ရှေ့နေ မသေတဲ့ဆေးသမားဆိုသလို လူတိုင်းကိုယ်စီ တစ်ခုခု မှား ဖူးတတ်ကြစမြဲပါ။အနာဟောင်းကို
လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် ခဏခဏထုတ်သုံးရင်တော့ အဲဒီအိမ်ထောင်ရေးပြန်အဆင်ပြေဖို့ ခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်။
၅။ အိမ်ထောင်ဘက် ၏ မိဘနဲ့ အိမ်သားများကိုထိခိုက်စေသော စကားများ
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခုခုအပေါ် မကျေနပ်လို့ သဘောမတူနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စအပေါ်သာ အချေအတင် ငြင်းခုန်သင့်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ မိဘနဲ့ မိသားစု ကို
စောင်းပြောတာမျိုး၊ထိခိုက်စေတဲ့ စကားမျိုး လုံး၀ရှောင်ကြင်ရမှာပါ။
၆။ ပစ္စည်းလွင့်ပစ်တတ်တဲ့ အကျင့်
ရန်ဖြစ်ပြီဆိုမှ နဂိုကတည်းက အသံကကျယ်လှောင်ပြီးသား၊ ပစ္စည်းလွင့်ပစ်တဲ့ အသံ၊ ခုန်ထု တဲ့အသံ၊ ပစ္စည်းကျကွဲသွားတဲ့အသံ တွေနဲ့ ရောသွားရင် ပွဲအများကြီး
ပိုကြမ်းသွားတတ်ပါတယ်။ ချစ်လို့ယူထားကြတာပဲ၊ပစ္စည်းလွင့်ပစ်လို့ ကျကွဲတယ်ဆိုတာ နှလုံးသားကျ ကွဲတာနဲ့တူတတ်ပါတယ်။
၇။ စိတ်နာစေတဲ့ စကားအသုံးအနူန်းများ
စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့ ရတယ်။ စိတ်နာအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့၊စိတ်နာစေတဲ့ စကားမျိုး လုံး၀ရှောင်ကြင်သင့်ပါတယ်။ “ ရှင်ကိုအားကိုးလို့တော့ သူတောင်းစားပဲဖြစ်သွားမှာ၊
သူများယော့ကျၤားတွေကြည့် ပိုက်ဆံရှာဘယ်လောက်တော်လဲ၊ရှင်နဲ့တစ် စက်ကလေးမှ မတူဘူး ”စတဲ့စကားမျိုး ကို မပြောဆိုရပါ။
၈။ သေတာနဲ့ ချိန်းခြောက်ခြင်း
ငါအသက်ရှင်နေတာ ဘာထူးသေးလဲ၊ငါအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူး ၊ ငါမင်းကို သေပြမယ်စသည်ဖြင့် သေတာနဲ့ ချိန်းခြောက် တာမျိုးလုံး၀ရှောင်ကြင်သင့်ပါတယ်။
၉။ လက်ပါ ခြင်း
ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုး ကိုယ့်လက် ကိုလုံး၀ ထိန်းထားရပါမယ်။
တစ်ချက်ရိုက်မိသွားရင်ချစ်ခဲ့သမျှ အတိုးရော အရင်းပါ ဆုံးရူံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပ ဒဏ်ရာ ကုစားရ လွယ်သလောက် စိတ်တွင်းက ဒဏ်ရာကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ မလွယ်လှပါ။
၁၀။ ကွဲမယ် ဆိုတဲ့စကား အလွယ်တကူသုံးခြင်း
ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးတဲ့ အခါ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ် မျိုး ၀င်တတ်ပါတယ်။ ကွဲမယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ နိမိတ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ရန်မဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အချစ်ဆိုတာဟာ အိမ်ထောင်သက် ကြာလာတာနဲ့ အမျှရင်ခုန်တာတွေ ဓါတ်လိုက်တာတွေ
တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ဆက်ပြီးတန်ဖိုးထားနေသေးခြင်းကို ဆိုလိုပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
#အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်း ခိုင်မြဲအောင်
၁။ အပြန်အလှန် လေးစားပါ
ခင်ပွန်းကလည်း ဇနီးဖြစ်သူကို လေးစားပါ။ ဇနီးကလည်း ခင်ပွန်းကို လေးစားပါ။ ထိုသို့
အပြန်အလှန် လေးစားခြင်းဟာ အိမ်ထောင်းရေး အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်တစ်ခု ဆိုလည်း မှားမယ် မထင်ပါ။
ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလောက်ကိုပင် မယုံမကြည် မတွေးသင့်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
အပြန်အလှန် ယုံကြည်မူ ထားရှိခြင်းအားဖြင့် အတော်အတန် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခင်ပွန်း အတွက် ဇနီးသည်က အနစ်နာခံ သလို ဇနီးအတွက်လည်း ခင်ပွန်းက အနစ်နာ
ခံပေးပါ။ ထိုသို့ မဟုတ် ဘယ်သူ သာတယ် ဘယ်သူ နာတယ်လို့ တွေးတောနေရင်တော့ မကောင်းပါ။
၄။ မိမိတာဝန် မိမိကျေပွန်ပါစေ
ခင်ပွန်းမှာလည်း ခင်ပွန်း တာဝန်ယူထားတဲ့ တာဝန် ရှိသလို ဇနီးမှာလည်း ဇနီးသည်
တာဝန်ယူတဲ့ ကိစ္စ တာဝန်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ထိုတာဝန်တွေကို နှစ်ယောက်လုံး ကျေပွန်ကြပါစေ။
၅။ မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ပါ
ချစ်ခြင်း မေတ္တာကတော့ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဖက် အပေါ် ချစ်မှသာ
အိမ်ထောင်ရေးက ရေရှည်ခိုင်မြဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိသို့ မဟုတ်ဘဲ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ မရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်။
Author admin 1Posted on March 12, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​သင့္ခ်စ္သူ သင့္ဇနီးထံမွာ ဒီအခ်က္ ၈ ခ်က္ ရွိေနရင္ သင္ဟာ ကံအေကာင္းဆံုး လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါတယ္
Author admin 1Posted on March 12, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေပးကမ္းလွဴတမ္းမယ့္သူမ်ား ဒီပို႔ေလးကို ၾကည့္သြားၾကပါလို႔ ရင္နင့္စြာနဲ႔ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၱား တကၠသုိလ္မွ ဘီေအဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါဠိ၊ ျမန္မာစာဆရာ ၊ စာရင္းကုိင္ ၊ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ၊ အတြင္း၀န္ ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး စသည္ျဖင့္ ရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ မွစတင္ကာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ပါဠိ-ျမန္မာ-အဘိဓာန္ က်မ္းကုိျပဳစုခဲ့သည္။ ယေန႔တုိင္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ အားကုိးအားထားျပဳရသည့္ အဘိဓာန္က်မ္းမ်ားကုိ အသက္ထက္ဆုံးျပဳစုသြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၉၄ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
အလြန္တရာ ခက္ခဲလွေသာ ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ ေနရာကို မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္ တုိင္တုိင္ (၅) ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ဗုိလ္စြဲခဲ့ေသာ ဦးဟုတ္စိန္၏ မိသားစုမ်ဳိးဆက္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ထူးျခားလွပါေတာ့သည္။ (အငယ္ဆံုး ၿဖိဳးသန္႔ထူးကလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တတိယ ရရွိခဲ့ပါတယ္။)
ပုဂၢဳိလ္ထူးတုိ႔ရဲ႕ဘ၀တစ္ေကြ႔ – တင္ႏုိင္တုိး
တက္ကသိုလ်၀င်တန်း စာမေးပွဲသည် ကြိုးစားသူများအတွက် အောင်မြင်ဖို့ သိပ်မခက်လှသော စာမေးပွဲဖြစ်သော်လည်း ဂုဏ်ထူးများပါဖို့ တော့ခက်ခဲလှသည်။ ထိုထက်ပို၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ မှ ၁၀ အထိ ၀င်ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပြီး အဆင့် ၁ နေရာကိုရရန်အတွက်မှု မည်မျှခက်ခဲကြောင်း ပြော၍ မလိုတော့ပါ။ သို့သော် ထို နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ နေရာကို မျိုးဆက်လေးဆက်တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ် ဆက် ရရှိခဲ့သူများ ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုလျှင် အလွန်အမင်းအံသြသွားနိုင်ပါသည်။ မသိသေးသူများအတွက် ထိုမိသားစု အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြလိုပါသည်။
ယခင်က ဘင်္ဂလားစာမေးပွဲ (ခေါ်) ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်၌ စိန်ပေါလ်ကျောင်းမှ မောင်ဟုတ်စိန်က မြန်မာနိုင်ငံလုံး ပထမ အဆင့်ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စိန်ပေါလ်ကျောင်း နှင့် စိန်ဂျွန်းကျောင်းတို့မှာ အဓိကပြိုင်ဘက်များဖြစ်ခဲ့သည်။ မောင်ဟုတ်စိန် သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက အလွန်တော်ပြီး နှစ်စဉ် ထူးချွန်ဆုများ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံလုံး ပထမ အဆင့်ရချိန်တွင် မောင်ဟုတ်စိန်မှာ အသက်(၁၉) နှစ် သာ ရှိသေးသည်။ ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့် ကာလကတ္တားတို့၌ ပညာသင်ဆု ရခဲ့ပြီး တက်ရောက်သင်ယူခဲ့သည်။
၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် ကာလကတ္တား တက္ကသိုလ်မှ ဘီအေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပါဠိ၊ မြန်မာစာဆရာ ၊ စာရင်းကိုင် ၊ လက်ထောက်အတွင်း၀န် ၊ အတွင်း၀န် ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး စသည်ဖြင့် ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ မှစတင်ကာ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ ပါဠိ-မြန်မာ-အဘိဓာန် ကျမ်းကိုပြုစုခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင် ရဟန်းရှင်လူတို့ အားကိုးအားထားပြုရသည့် အဘိဓာန်ကျမ်းများကို အသက်ထက်ဆုံးပြုစုသွားခဲ့ပြီး အသက် ၉၄ နှစ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဦးဟုတ်စိန် နှင့် ဇနီးဒေါ်မြမေတို့မှ သား မောင်စောလှိုင်ကို ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မောင်စောလှိုင်သည် ဒုတိယ မျိုးဆက် အဖြစ် ဖခင်ခြေရာကို နင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံလုံး ပထမ ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဦးစောလှိုင်မှာ နောင်တွင် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနသို့ ၀င်ရောက် အမှုထမ်းခဲ့ရာ စပိန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်၀န် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဦးစောလှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ညွန့်ရီတို့မှ သမီး သန်းသန်းတင်(ချယ်ရီ) ကို ဖွားမြင်ပါသည်။ သန်းသန်းတင်သည် စိန်ဂွန်းကွန်ဗင့်(ယခု လသာ ထ-၂) ကျောင်း၌ ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဒေါ်သန်းသန်းတင်မှာလည်း ဖခင် နှင့် အဘိုးတို့၏ ခြေရာကို ဆက်နင်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ပထမ အဆင့်နေရာကို St Mary Diocesan အမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် မီးယပ် နှင့်သားဖွားပါရဂူ ဆေးပညာရှင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်ချယ်ရီသန်းသန်းတင် အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဒေါ်ချယ်ရီသန်းသန်းတင်သည် အထူးကု ဆရာ၀န်ကြီး ဦးအောင်မွန် နှင့် လက်ဆက်ကာ သားစော၀င်းမြင့် ၊ သမီး စမ်းယုမွန် နှင့် သားမောင်ဖြိုးသန့်ထူးတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဦးဟုတ်စိန်၏ စတုတၳမျိုးဆက်ဖြစ်သူ မောင်စော၀င်းမြင့်က အဘေး၊ အဘိုး ၊ မိခင် တို့၏ ခြေရာကို ထပ်မံနင်းနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ စော၀င်းမြင့်သည် ဒသမတန်းစာမေးပွဲကို အထက၂ ကမာရွတ် မှ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ရခဲ့သည့်အပြင် ထိုခေတ်ကာလက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးစံချိန်ဖြစ်သော အမှတ်ပေါင်း ၅၅၇ မှတ် ကို စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
စော၀င်းမြင့် ဆယ်တန်း အောင်မြင်စဉ်က ညီမဖြစ်သူ စမ်းယုမွန်မှာ သတ္တမတန်းသာ ရှိသေးသည်။ စမ်းယုမွန်သည်လည်း ဦးဟုတ်စိန်၏ မျိုးဆက်ဖြစ်သဖြင့် ဆွေမျိုးများ၏ အားထား ခြင်းကိုခံရသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စမ်းယုမွန်သည် ဒသမတန်း စာမေးပွဲကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ အဘေး၊ အဘိုး ၊ မိခင် ၊ အစ်ကို တို့၏ ခြေရာကို နင်းမှနင်းနိုင်ပါ့မလား ဟူ၍ စမ်းယုမွန်၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ရင်တမမ နှင့် တဆွေမျိုးလုံး စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် စမ်းယုမွန်သည်လည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် အဆင့် ၁ ဖြင့် ဗိုလ်စွဲ ခဲ့ပြန်ပါသည်။
အလွန်တရာ ခက်ခဲလှသော နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ နေရာကို မျိုးဆက်လေးဆက် တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲခဲ့သော ဦးဟုတ်စိန်၏ မိသားစုမျိုးဆက်များမှာ အလွန်ပင်ထူးခြားလှပါတော့သည်။ (အငယ်ဆုံး ဖြိုးသန့်ထူးကလည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး တတိယ ရရှိခဲ့ပါတယ်။)
ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့ရဲ့ဘ၀တစ်ကွေ့ – တင်နိုင်တိုး
Author admin 1Posted on March 11, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္ ၅ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ဆယ္တန္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးပထမေနရာကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသူမ်ား
​ဒီေခတ္ ဒီအခါ ဒီအခ်စ္နဲ႔ ဒီအရွက္…။ ၾကည့္ရဲရင္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္သြားေနာ္..။
ဝန္ထမ္းေလာကအမႈ အခင္းေတြကိုေတာ့ၾကား႐ံုသက္ သက္မွ်ပါပဲ။ျမန္မာတစ္ႏိုင္ ငံလံုး မွာ ေန႔စဥ္နဲအမွ်ျဖစ္ေပၚေနတဲ့မႈ ခင္းကိစၥေတြကို ၾကည့္ရင္ကာမ တဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကတဲ့ အမႈ ကိစၥေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ျပင္ဦးလြင္ ေလ့က်င့္ ေရးတပ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့လူသတ္မႈကို မႏၱေလးျပင္ ဦးလြင္ အနီးတစ္ဝိႈက္ ကသူေတြေတာ့သိခဲ့ရၾကမွာပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ရာထူးကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး ကာမတဏွာလြန္ကဲ ခဲ့ၾကရာမွ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို လင္ ငယ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးသတ္ျဖတ္ အစ ေဖ်ာက္ခဲ့တဲ့ အမႈႀကီးေပါ့။
အေတာ္ ေလးကို ေလ့လာစံုစမ္း ေထာက္ လွမ္းၿပီးမွ အမႈမွန္ေပၚလာခဲ့ရပါ ေတာ့တယ္။ အရာရွိ ရဲ႕ ဇနီးက အိမ္မွာ ယာဥ္ေမာင္းဖို႔တာဝန္ယူ ထားတဲ့ ကားဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔ေဖာက္ ျပားခဲ့ၾကတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက တျဖည္းျဖည္းရိပ္မိလာေတာ့ ခင္ ပြန္းကိုသတ္ အစေဖ်ာက္ၿပီး အ ေလာင္းကို အိမ္ေနာက္ က ငွက္ ေပ်ာေတာထဲမွာ သြားျမႇဳပ္ထား ခဲ့ၾကတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အမဲ လိုက္သြားတာ ျပန္မလာဘူးဆို ၿပီး ေျပာဆိုအသံလႊင့္ခဲ့တယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြက ေတာပစ္ တတ္တဲ့ေနရာေတြကို လိုက္လံ စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းတယ္။ မထူး ျခားဘူး။
ေကာင္းၿပီ။ ကာမတဏွာ သတၲဝါႀကီးအတြက္ မသင့္ ေတာ္တာေတြမလုပ္ၾကပဲဒီထက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ ေငြေပးၿပီး ေပ်ာ္ပါးႏိုင္တဲ့ အေပ်ာ္ မိန္းက ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။လူ တစ္ေယာက္ကေျပာဘူးပါ တယ္။ မလြတ္မလပ္သူေတြနဲ႔ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြျပဳေနမယ့္အစား အႏွီကိစၥအတြက္ ေငြေပးၿပီးရႏိုင္ တဲ့ေနရာေတြရွိေနပါတယ္။
က်ဳပ္ တို႔ကေတာ့ေငြေပးတဲ့စနစ္ပဲက်င့္ သံုးတယ္ဆိုပဲ။ စာေရးသူတို႔ ငယ္ စဥ္အခ်ိန္က ေအကိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြမရွိေသး ပါဘူး။ ထိုစဥ္က ယေန႔တီဗီမွာ ေၾကာ္ျငာေ ပးေနေသာ ‘ အေဖာ္’ ဆိုတဲ့ပစၥည္းကို မသံုးခဲ့ရင္လည္း ျပႆနာမရွိခဲ့ဘူး။ လူေတြအသံုး မ်ားတဲ့မိန္း ကေ လးေတြနဲ႔ ဆက္ ဆံမိရင္သာသူတို႔မွာရွိေနတတ္တဲ့ ဆစ္ဖလစ္ပိုးေၾကာင့္ ကိုဖိုးၾကာ ဘြဲ႕ကိုရ ယံုေလာက္ သာျဖစ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ကိုဖိုးၾကာရဲ႕ အႏၱရာယ္ ကိုေတာ့ ပင္နယ္စလင္ ၅သိန္း အား ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ထိုးလိုက္ တာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားၾကရပါတယ္။
ယေန႔ကာလလည္း ျပည့္ တန္ဆာေတြဆိုတာ ရွိေနဆဲလို႔ သိေနရပါတယ္။ ရွိေနလို႔လည္း အေဖာ္ဆိုတဲ့ ကြန္ဒံုးကိုတရားဝင္ ေၾကာ္ျငာေပးေနရပါတယ္။ ခုခံ အား က်ဆင္းမႈ ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ဖို႔ နည္း လမ္းေတြကို လည္းျဖန္႔ေဝေပးေနတာ မဟုတ္ ပါလား။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း အတြက္အျခားႏိုင္ငံေတြ လိုတရား ဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးတာပဲရွိပါ တယ္။
ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့အေၾကာင္းေရးဖို႔ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုေလ့လာရင္း ဟိုေမးဒီေမးလုပ္ ခဲ့ပါေသး တယ္။ လက္ရွိဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ မွာလံုးဝကင္းရွင္းပါတယ္လို႔အာမခံ ခ်က္ေပးပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္သူ ငယ္စဥ္ကရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖ ဖို႔ အတြက္ ေပ်ာ္ဘြယ္ကေန မႏၱေလးလာၿပီး ၇၃လမ္းေပၚ က ‘ စိန္သိန္း’ တည္းခိုခန္းမွာ ဆယ္ ရက္ေလာက္ စာက်က္ေနရင္း တည္းခိုခဲ့တယ္တဲ့။ ေရာက္စ တည္းခိုခန္းထဲ စာက်က္ေနစဥ္ မသိကြ်မ္းဖူးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္က အခန္းတံခါးကိုလာ ေခါက္ၿပီး မိတ္ဆက္လာတယ္။
တစ္ရက္မဟုတ္၊ႏွစ္ရက္သံုးရက္ တံခါးလာေခါက္ေတာ့ ငါက စာ ေမးပြဲ ေျဖမလို႔ စာက်က္ေနတာ၊ ဒီကိစၥေတြ စိတ္မဝင္စားဘူး၊ မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႔၊ စာပဲစိတ္ဝင္ စားတယ္ လို႔ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ ျပပါတယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ျပန္ ေတာ့ စာေမးပြဲေျဖမယ့္ ျပည္သူ႔ ရဲေတြေနာက္ တစ္ေန႔ လာတည္း ၾကတဲ့အခါ အဲဒီ မိန္းကေလး လည္း တည္းခိုးခန္းမွာ အသံ ေတာင္ မၾကားရေတာ့ ပါဘူးလို႔ လည္းထပ္ေျပာျပေတာ့သူ႔စကား ကိုယံုၾကည္လိုက္ပါတယ္။
ဒီခေတ် ဒီအခါ ဒီအချစ်နဲ့ ဒီအရှက်…။ ကြည့်ရဲရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သွားနော်..။
တဏှာဆိုတဲ့ တပ်မက်ခြင်း မှာ အကြောင်းအရာ တွေများပြား လှပါတယ်။ စားချင်၊ ဝတ်ချင်၊ လှပချင်၊ လိုချင်၊ ပိုင်ဆိုင်ချင်၊ ချမ်းသာချင်စသည့် တပ်မက်မှု တဏှာများစွာ တွေထဲက ကာမ တဏှာက လည်းအပါ အဝင်ဖြစ် ပါတယ်။ လူ့လောကမှာ အဖိုနဲ့ အမ နှစ်မျိုးရှိကြသလို တိရိစၦာန် သတ္တဝါတွေ ထဲမှာ အဖိုနဲ့အမ သာ ရှိကြတာ သိကြပြီးသားပါ။ အဖို အမ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်သာ မွေး ဖွားပေါက်ဖွား လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ် ပါတယ်။
အသိဉာဏ် ရှိသောလူသား တွေ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေစား သောက်ကြရာမှာ လုပ်ငန်းမျိုးစုံရှိ တဲ့အထဲက ကိုယ်ခန္ဓာကို ရင်းနှီး ရှာဖွေစားသောက် ကြရတဲ့ အမျိုး သမီးတွေ ရှိသလို အဲဒီမိန်းကလေး တွေကို စီမံအုပ်ချုပ် လုပ်ငန်းခွဲ ဝေ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေး ရတဲ့ ‘ဂေါင်း’လည်း ရှိလာပြန်ပါ တယ်။ လူတွေဟာ ကာမတဏှာ နဲ့ပတ်သက်လာရင် အလွန်အမင်း ထက်သန်တဲ့ ယောကျာ်းတွေ မိန်းမတွေလည်း ရှိတတ်ကြ ပါသေး တယ်။ သံဝါသကိစ္စမှာ အလွန် ပျော်မွေ့ ပျော်ပိုက် တတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
အနည်းငယ် ဖြတ်ပြီးပြော လိုက်ပါဦးမယ်။ လူတွေကို ” ဒု၊ သ၊န၊သော”ရှောင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ တိုက်တွန်းထား ပေမယ့် ကာမတဏှာ ကြောင့် မမျှော်လင့်သော အကြောင်းကိစ္စ တွေ ဖြစ်လာတတ် ကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တရားဥပဒေမှာ လင်ခိုးမှု၊ မယားခိုးမှု ဆိုတဲ့ အမှု ကိစ္စတွေအတွက်ဥပဒေပုဒ်မတွေ ထားကြရတာပေါ့။ ကာမတဏှာ လွန်ကြူးလာတဲ့အခါ အသက် ကိုရန်ရှာဖို့ မကြောက်တော့တဲ့ အထိ စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတတ် ကြပါတယ်။ ပြင်ပလောကမှာ လည်းဖြစ်တာပါပဲ။အစိုးရဝန်ထမ်း လောကထဲ မှာလည်းဖြစ်တတ်ကြ တာပါပဲ။ အပြင်လောကကြီးရဲ့ အမှုကိစ္စတွေကိုတော့ မှုခင်းဂျာ နယ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဖတ်ရှုကြရ ပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ထမ်းလောကအမှု အခင်းတွေကိုတော့ကြားရုံသက် သက်မျှပါပဲ။မြန်မာတစ်နိုင် ငံလုံး မှာ နေ့စဉ်နဲအမျှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မှု ခင်းကိစ္စတွေကို ကြည့်ရင်ကာမ တဏှာကြောင့် ဖြစ်ကြတဲ့ အမှု ကိစ္စတွေ များစွာရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တော်တော် များများက ပြင်ဦးလွင် လေ့ကျင့် ရေးတပ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုကို မန္တလေးပြင် ဦးလွင် အနီးတစ်ဝှိုက် ကသူတွေတော့သိခဲ့ရကြမှာပါ။ မိမိတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရာထူးကို မေ့ပျောက်ပြီး ကာမတဏှာလွန်ကဲ ခဲ့ကြရာမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လင် ငယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသတ်ဖြတ် အစ ဖျောက်ခဲ့တဲ့ အမှုကြီးပေါ့။
အတော် လေးကို လေ့လာစုံစမ်း ထောက် လှမ်းပြီးမှ အမှုမှန်ပေါ်လာခဲ့ရပါ တော့တယ်။ အရာရှိ ရဲ့ ဇနီးက အိမ်မှာ ယာဉ်မောင်းဖို့တာဝန်ယူ ထားတဲ့ ကားဒရိုင်ဘာနဲ့ဖောက် ပြားခဲ့ကြတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက တဖြည်းဖြည်းရိပ်မိလာတော့ ခင် ပွန်းကိုသတ် အစဖျောက်ပြီး အ လောင်းကို အိမ်နောက် က ငှက် ပျောတောထဲမှာ သွားမြှုပ်ထား ခဲ့ကြတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမဲ လိုက်သွားတာ ပြန်မလာဘူးဆို ပြီး ပြောဆိုအသံလွှင့်ခဲ့တယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေက တောပစ် တတ်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်လံ စုံစမ်းထောက် လှမ်းတယ်။ မထူး ခြားဘူး။
အိမ်ပေါ်မှာလည်းရှာဖွေ စစ်ဆေးကြပါတယ်။ သဲလွန်စ ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ အသက်အရွယ် အရ မျက်မှန်မတပ်ခဲ့ရင် တောပစ်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ခင်ပွန်းသည် တပ်နေကျ မျက်မှန်ကိုဘုရားစင် ပေါ်မှာသွားတွေ့တယ်။ မျက်မှန် ရှိနေတဲ့အတွက် တောပစ်သွား တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ရပြီး နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် စစ်ဆေး ရာကလူသတ်မှုကြီးဟာ ရှင်းရှင်း ဘွင်း ဘွင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရ ပါတော့တယ်။ ကာမတဏှာဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်း ပါသလဲဗျာ။
နောက်ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ကတော့ကာမ တဏှာပေါ်စွဲလမ်း တပ်မက်တဲ့အပြင် အရွယ်နုနယ် မှုကို လိုလားတပ်မက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်က မိထၳီလာမြို့က တပ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တပ် ရဲ့ အကြီးအကဲ ဇနီးက ငယ်ရွယ် တဲ့ အရာရှိငယ်လေးနဲ့ ဖောက် ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့။ လူ့ ရဲ့ အသက်ကိုတော့ ရန်မရှာပါ ဘူး။ ခင်ပွန်းသည် ရှေ့တန်းသွား နေတုန်း လွန်ကြူးမိကြတဲ့သူတို့ ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို စာတွေ ဆက် သွယ် ရာမှတဆင့် သိရှိသွားခဲ့ပြီးအရာ ရှိငယ် ထောင်ကျသွားခဲ့ရတဲ့အ ဖြစ်တစ်ခုပါ။ ကြာလည်းကြာခဲ့ ပါပြီ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကာမ တဏှာနောက်လိုက်မိရာကနေ ထောင်ကျခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို သင်ခန်းစာယူစေ ချင်တာပါ။
ကောင်းပြီ။ ကာမတဏှာ သတ္တဝါကြီးအတွက် မသင့် တော်တာတွေမလုပ်ကြပဲဒီထက် အဆင်ပြေစေမယ့် ငွေပေးပြီး ပျော်ပါးနိုင်တဲ့ အပျော် မိန်းက ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။လူ တစ်ယောက်ကပြောဘူးပါ တယ်။ မလွတ်မလပ်သူတွေနဲ့ လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေပြုနေမယ့်အစား အနှီကိစ္စအတွက် ငွေပေးပြီးရနိုင် တဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ်။
ကျုပ် တို့ကတော့ငွေပေးတဲ့စနစ်ပဲကျင့် သုံးတယ်ဆိုပဲ။ စာရေးသူတို့ ငယ် စဉ်အချိန်က အေကိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေမရှိသေး ပါဘူး။ ထိုစဉ်က ယနေ့တီဗီမှာ ကြော်ငြာေ ပးနေသော ‘ အဖော်’ ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကို မသုံးခဲ့ရင်လည်း ပြဿနာမရှိခဲ့ဘူး။ လူတွေအသုံး များတဲ့မိန်း ကေ လးတွေနဲ့ ဆက် ဆံမိရင်သာသူတို့မှာရှိနေတတ်တဲ့ ဆစ်ဖလစ်ပိုးကြောင့် ကိုဖိုးကြာ ဘွဲ့ကိုရ ယုံလောက် သာဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကိုဖိုးကြာရဲ့ အန္တရာယ် ကိုတော့ ပင်နယ်စလင် ၅သိန်း အား ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထိုးလိုက် တာနဲ့ ပျောက်သွားကြရပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ရော ဂါပိုးဆန်းတွေရဲ့ အခြေအနေက ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ ရာထူးကြီး ကြီးပေးသလို ဗှှီု ဆိုတဲ့ အ ဆင့်မြင့် ရောဂါပိုးကြီး ဖြစ်နေကြပါ ပြီ။ ကုရာနတၳိ ဆေးမရှိမို့ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ကာမတဏှာ အတွက် အပျော်မိန်းကလေးများနှင့် စခန်း သွားဖြေဖျောက်ရန်မသင့်တော့ပါ။ ဒါတောင် တစ်ယောက် ကပြော သေးတယ်။ မင်းတုန်းမင်းတြား ကြီးတောင် မိဖုရားတွေ၊မောင်းမ မိတ်သံတွေ များစွာရှိနေတဲ့ကြား က မကြေနပ်နိုင်သေးလို့ နန်းပြင် ကိုထွက်ပြီးတိတ်တဆိတ်ပျော် ပါးသေးတာပဲ၊ယောကျာ်းပဲကွာ၊ ကိုယ့် အတွက်နောင်ဖြစ်လာမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပြီးသွား တာပေါ့လို့လည်းပြောတာကို ကြားခဲ့ရပါေ သးတယ်။
စာရေးသူရဲ့ တပည့်လေး တစ်ယောက်ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် နဲ့ ဗကိုက်တဲ့ ရောဂါနဲ့သေတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ရ တာလဲဆိုပြီး စုံစမ်း ကြည့်ပါတယ်။ တပည့်တွေက အဘရေ …. အရေးအခင်း ကာလပြီးတော့အချို့ မိန်းကလေး တွေက လုပ်ကိုင် ရှာဖွေ စား သောက်ရတာ ခက်တယ်ထင်ပါ တယ်။ ပေါလိုက်တဲ့ မိန်းမတွေ၊ မန္တလေးမြို့မှာ ဘယ်လောက်ထိ ဈေးပေါသလဲဆိုရင်၁၀/၂၀ကျပ် လောက်နဲ့လည်း အဲဒီကာလက အဆင်ပြေ ခဲ့ကြတာ။ အဲဒီအချိန် က ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြောင့် ထိခဲ့ရတယ်လို့ ထင်ရ တာပါပဲတဲ့။
ယနေ့ကာလလည်း ပြည့် တန်ဆာတွေဆိုတာ ရှိနေဆဲလို့ သိနေရပါတယ်။ ရှိနေလို့လည်း အဖော်ဆိုတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုတရားဝင် ကြော်ငြာပေးနေရပါတယ်။ ခုခံ အား ကျဆင်းမှု ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဖို့ နည်း လမ်းတွေကို လည်းဖြန့်ဝေပေးနေတာ မဟုတ် ပါလား။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း အတွက်အခြားနိုင်ငံတွေ လိုတရား ဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် မပေးတာပဲရှိပါ တယ်။
တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေး လိုက်ရင် ပြည့်တန်ဆာတွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေ ပေါ်လာဦးမလား မပြောတတ်ပါ ဘူး။ တချို့က ပြည့်တန်ဆာဆို တာ တိုင်းပြည်ရဲ့ တန်ဆာတစ်ခု မို့ ရှိသင့်တယ်လို့ ဆိုနေကြတာ လည်း ကြားနေရပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ပတ်သက် တဲ့အကြောင်းရေးဖို့ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလေ့လာရင်း ဟိုမေးဒီမေးလုပ် ခဲ့ပါသေး တယ်။ လက်ရှိဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဘဝ မှာလုံးဝကင်းရှင်းပါတယ်လို့အာမခံ ချက်ပေးပါ တယ်။ ဒါပေမယ့်သူ ငယ်စဉ်ကရာထူးတိုးစာမေးပွဲဖြေ ဖို့ အတွက် ပျော်ဘွယ်ကနေ မန္တလေးလာပြီး ၇၃လမ်းပေါ် က ‘ စိန်သိန်း’ တည်းခိုခန်းမှာ ဆယ် ရက်လောက် စာကျက်နေရင်း တည်းခိုခဲ့တယ်တဲ့။ ရောက်စ တည်းခိုခန်းထဲ စာကျက်နေစဉ် မသိကျွမ်းဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ် ယောက်က အခန်းတံခါးကိုလာ ခေါက်ပြီး မိတ်ဆက်လာတယ်။
တစ်ရက်မဟုတ်၊နှစ်ရက်သုံးရက် တံခါးလာခေါက်တော့ ငါက စာ မေးပွဲ ဖြေမလို့ စာကျက်နေတာ၊ ဒီကိစ္စတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး၊ မနှောက်ယှက်ပါနဲ့၊ စာပဲစိတ်ဝင် စားတယ် လို့ပြောခဲ့ကြောင်း ပြော ပြပါတယ်။ ကံကောင်းချင်ပြန် တော့ စာမေးပွဲဖြေမယ့် ပြည်သူ့ ရဲတွေနောက် တစ်နေ့ လာတည်း ကြတဲ့အခါ အဲဒီ မိန်းကလေး လည်း တည်းခိုးခန်းမှာ အသံ တောင် မကြားရတော့ ပါဘူးလို့ လည်းထပ်ပြောပြတော့သူ့စကား ကိုယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်း၊ အရပ်သား၊အနု ပညာသမားများ၊ ကုမ္ပဏီတွေ ထဲမှာမိန်းမကိစ္စအတွက် မရှောင် နိုင်ကြတာတွေ အများကြီးပါ။ မိမိမှာ ကာမပိုင်ရှိရက်နဲ့ လုပ်ငန်း ခွင်မှာနီးစပ်မှုသံယောဇဉ်တွေဖြစ် ကြပြီး အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီး ကြတာတွေလည်းအများကြီးပါ။ ဇနီးကရှုပ်လို့ယောကျာ်းကတရား ဝင်ကွာရှင်းတာ၊ ယောကျာ်းက ဖောက်ပြန်လို့ဇနီးဖြစ်သူက ကွာ ရှင်းတာတွေသတင်းစာတွေထဲ မှာလည်း တွေ့တွေ့ နေကြရပါ တယ်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီး တွေက ယောကျာ်းတွေအပေါ် သောက်စားတတ်တာလောက် ကိုခွင့် လွတ်နို င်ကြပေ မယ့်ဖောက် ပြန်တဲ့ကိစ္စ၊ အပျော်မိန်းမလိုက် စားနေကြတဲ့ကိစ္စတွေကို လုံးဝ ခွင့် မလွတ် တတ်ကြပါဘူး။ မုန့် ကိုသာ ဝေစားနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးလိုပါပဲ။
အချို့သော အရာရှိကြီး တွေက မိန်းမတွေနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ တပည့်တွေကိုရှာဖွေခိုင်းပြီး ပျော် ပါးတတ်ကြတာကို လည်းတွေ့ရ ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ သိက္ခာ က အရေးကြီးပါတယ်။ အချို့က လုပ်ငန်းကိစ္စ အောင်မြင်အဆင် ပြေဖို့ မိန်းမနဲ့ မြူဆွယ်တတ်ကြ တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကာမတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ်း သိမ်းရှောင်ရှားနိုင်ကြရင်အကောင်း ဆုံးပါပဲ။
မိန်းမနား မကပ်ရရင်မနေ နိုင်တဲ့ယောကျာ်းနဲ့ ယောကျာ်နဲ့ မဆက်ဆံရရင်မနေနိုင်တဲ့ ဟတၳနီ လို မိန်းမတွေ လည်း ရှိတတ်ပါ တယ်။ စာရေးသူ အရာရှိဘဝ ဗထူးရပ်စောက်မှာ ခွဲမှူးသင်တန်း တက်ရတော့ အချို့သင် တန်းသား အရာရှိတွေက မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ အောင်ပန်းမြို့အထိ သွားတတ်ကြတယ်။ အောင်ပန်း ကပွင့်သစ်စ တည်းခိုခန်းမှာ မိန်း ကလေးတွေ ပေါတယ်လေ။ ဒါကို သိနေတဲ့ သင်တန်းမှူး ဗိုလ်မှူး သိန်းအောင်ကအရာရှိများ အသိ တရား၊သတိတရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီး နေထိုင်ကြပါ၊သွားကြလာကြပါ။ တကယ် လို့ မအောင့်နိုင်ဘူးမနေ နိုင်ဘူးဆိုရင်မိုးပေါ်သာ ထောင် ဖောက်လိုက်ကြပါလို့ ပြောခဲ့ပါ တယ်။ အစက သဘောမပေါက် ကြဘူး။နောက်မှစဉ်းစားရင်းတွေး ရင်းသဘောပေါက်မှဝါးကနဲရယ် ကြရပါတော့တယ်။
ထို့ကြောင့် ကာမတဏှာ ဘက် လွန်ကျွံတာ မကောင်းပါ ဘူး။မိမိကိုယ်မိမိထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြင့် ဘာသာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများတွင် အားပြုနိုင်ကြပါစေ။ မကောင်းသောမိန်းမ ပြည့်တန်ဆာမှန်း သိရက်နှင့် မကောင်း မှုတွင်ပျော်မွေ့ပါက တခဏတာ ကောင်းခြင်းနဲ့သာ ကြုံတွေကြရ ပြီး ထာဝရအတွက် ဒုက္ခများစွာ တွေ့နိုင်ပါကြောင်းစေတနာထား ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Author admin 1Posted on March 10, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ဒီေခတ္ ဒီအခါ ဒီအခ်စ္နဲ႔ ဒီအရွက္…။ ၾကည့္ရဲရင္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္သြားေနာ္..။
​မိမိ တုိ ့၏ ဆႏ ၵအေ လ်ွာက္ ဘဂၤလားေ ဒ့ ရွ္ႏို င္ငံ ဘက္ရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားေရာက္ ဟု ဘဂၤါလီမ်ား ဝန္ခံ
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ အဆင္မေျပတာနဲ႔ တဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ေဆြမ်ိဳးေတြက ဖိတ္ေခၚတဲ့အတြက္ ဆႏၵအေလ်ွာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ထြက္ခြာသြားရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီေတြ ကေျပာပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူသီး​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​ကေန ေနရပ္စြန္႔ခြါၿပီး ဘဂၤလား​ေဒ့ရွ္​နိုင္​ငံဘက္ ထြက္​ခြာဖို႔ ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ ေဂၚဒူသာရ ကမ္းေျခမွာ ယာယီတဲ့အိမ္ေတြ ထိုးေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဘဂၤလီမိသားစုေတြကို ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးရဲထြဋ္နဲ႔ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ ရဲမႉးႀကီးထြန္းျမတ္ထြန္းတို႔အဖြဲ႔က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
တဖက္ႏိုင္ငံထြက္ေျပးဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္တဦးက “သေဘာဆႏၵ အေလ်ွာက္သာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာဘက္မွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ အဆင္မေျပလို႔ ေတာေတာင္ေတြကိုသြားၿပီး ထင္းခုတ္ ဝါးခုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပျဖစ္လာၾကၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာ ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ မ်ားစြာေပးေနတယ္၊ ျမန္မာဘက္မွာ အဆင္မေျပရင္ အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ႏိုင္တယ္၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေလွပါစီစဥ္ေပးမယ္လို႔ ဖိတ္ေခၚတာမ်ားတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။
ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကေတာ့ ဘူသီးေတာင္သို႔ျပန္လိုပါက လံုျခံဳေရး စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္သလို စားနပ္ရိကၡာအားလံုးကူညီေပးမယ္ ျပန္လိုပါသလားလို႔ ေမးျမန္းရာမွာ ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္ေတြက မိမိတို႔ မျပန္လိုေတာ့ပါေၾကာင္း အခု ဒီကမ္းေျခက ေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုသာ အေရာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ေသာက္ေရေတြကိုလည္း ICRC က လာေရာက္ကူညီေပးမယ္လုိ႔ ဆက္သြယ္ထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖံုညိဳလိပ္ေက်းရြာက မာမတ္ဆာဒက္ကေတာ့ “ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုတဲ့သူေတြ၊ ေစ်းဆိုင္ေတြေရာင္းစားသူေတြကဘယ္လို႔မွ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ကိုမသြားပါဘူး။ တေန႔လုပ္တေန႔စား၊ လက္လုပ္လက္စား က်ပန္းလုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ေတာေတာင္ေတြ၊ သြားမရလာမရဆိုေတာ့ ထင္းမခုတ္ႏိုင္ဘူး၊ ဝါးမခုတ္ႏုိင္ဘူးေပါ့ေလ၊ တစ္ဖက္က ဟိုဘက္နိုင္ငံက လူေတြက ဖိအားေပး ေခၚေနတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဟိုမွာက ကူညီေထာက္ပံ့မူေတြမ်ားမ်ား ရတယ္ေပါ့ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က သြားေနၾကတာ” လို႔ေျပာပါတယ္။
မတ္လ ၇ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္းဝပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မြတ္ဆလင္ ၆၆၆ ဦးထဲက အမ်ဳိးသား ၁၀၀ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၂၁၀ ဦးတို႔ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွ ၃ စီးနဲ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး ၄၅၆ဦး ဆက္လက္ ေနထိုင္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးက သတင္းထုတ္ထားပါတယ္။
မိမိ တို ့၏ ဆန ္ဒအေ လျှာက် ဘင်္ဂလားေ ဒ့ ရှ်နို င်ငံ ဘက်ရှိ ဆွေမျိုးများထံ သွားရောက် ဟု ဘင်္ဂါလီများ ဝန်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေတာနဲ့ တဖက်နိုင်ငံရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေက ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ဆန္ဒအလျှောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ခွာသွားရတာဖြစ်တယ်လို့ နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂါလီတွေ ကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူသီး​တောင်​မြို့နယ်​ကနေ နေရပ်စွန့်ခွါပြီး ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရှ်​နိုင်​ငံဘက် ထွက်​ခွာဖို့ မောင်​​တောမြို့နယ်​ ဂေါ်ဒူသာရ ကမ်းခြေမှာ ယာယီတဲ့အိမ်တွေ ထိုးနေထိုင်နေကြတဲ့ ဘင်္ဂလီမိသားစုတွေကို မောင်တောခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွဋ်နဲ့ မောင်တောခရိုင် ရဲမှူးကြီးထွန်းမြတ်ထွန်းတို့အဖွဲ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့တာပါ။
တဖက်နိုင်ငံထွက်ပြေးဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင်တဦးက “သဘောဆန္ဒ အလျှောက်သာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာရတာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာဘက်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေလို့ တောတောင်တွေကိုသွားပြီး ထင်းခုတ် ဝါးခုတ်တဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေဖြစ်လာကြပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောက်နေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာ နိုင်ငံတကာက အကူအညီအထောက်အပံ့တွေ များစွာပေးနေတယ်၊ မြန်မာဘက်မှာ အဆင်မပြေရင် အချိန်မရွေး လာရောက်နိုင်တယ်၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိအောင် လှေပါစီစဉ်ပေးမယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်တာများတယ်”လို့ပြောပါတယ်။
မောင်တောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ ဘူသီးတောင်သို့ပြန်လိုပါက လုံခြုံရေး စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်သလို စားနပ်ရိက္ခာအားလုံးကူညီပေးမယ် ပြန်လိုပါသလားလို့ မေးမြန်းရာမှာ ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင်တွေက မိမိတို့ မပြန်လိုတော့ပါကြောင်း အခု ဒီကမ်းခြေက နေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသာ အရောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ သောက်ရေတွေကိုလည်း ICRC က လာရောက်ကူညီပေးမယ်လို့ ဆက်သွယ်ထားပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဖုံညိုလိပ်ကျေးရွာက မာမတ်ဆာဒက်ကတော့ “အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လိုတဲ့သူတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေရောင်းစားသူတွေကဘယ်လို့မှ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်ကိုမသွားပါဘူး။ တနေ့လုပ်တနေ့စား၊ လက်လုပ်လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကတော့ အခုအချိန်မှာ တောတောင်တွေ၊ သွားမရလာမရဆိုတော့ ထင်းမခုတ်နိုင်ဘူး၊ ဝါးမခုတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ၊ တစ်ဖက်က ဟိုဘက်နိုင်ငံက လူတွေက ဖိအားပေး ခေါ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဟိုမှာက ကူညီထောက်ပံ့မူတွေများများ ရတယ်ပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် သူတို့က သွားနေကြတာ” လို့ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၇ ရက်က မောင်တောမြို့နယ်၊ ဂေါ်ဒူသာရချောင်းဝပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာ မွတ်ဆလင် ၆၆၆ ဦးထဲက အမျိုးသား ၁၀၀ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၁၀ ဦး စုစုပေါင်း ၂၁၀ ဦးတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ စက်လှေ ၃ စီးနဲ့ ထွက်ခွာသွားပြီး ၄၅၆ဦး ဆက်လက် နေထိုင်နေတယ်လို့ ပြည်ထဲရေးက သတင်းထုတ်ထားပါတယ်။
Author admin 1Posted on March 9, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​မိမိ တုိ ့၏ ဆႏ ၵအေ လ်ွာက္ ဘဂၤလားေ ဒ့ ရွ္ႏို င္ငံ ဘက္ရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားေရာက္ ဟု ဘဂၤါလီမ်ား ဝန္ခံ
မေလးစားခ်င္ေနပါဗ်ာမေစာ္ကားပါနဲ႕ဘယ္သူမွေတာ့ ေပ်ာ္ပါးလို့ စစ္တိုက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူးက်ြန္ေတာ္တို့ဘဝရဲဲ႕ အေလ်ာ္အစားဆိုတာေပးလိုက္ရတဲ႕ အသက္ေတြနဲ႕ ေအာင္ျမင္
လို့ရလိုက္တဲ႕စခန္း ကုန္းေလးေတြပါပဲ”ပန္းကုံး”ေတြနဲ႕မျကိုရင္ေနပါ”ယမ္းဗုန္း”နဲ႕တူတဲဲစကားေတြနဲ႕ေတာ့ မထိုးနွက္ပါနဲ႕”အမ်ိဳးဖ်က္တဲ႕ မ်ိဳးမစစ္ ေတြထဲမွာက်ြန္ေတာ္တို႕မပါဘူး
ျမန္မာျပည္ျကီးမတိုးတက္ပါဘူးလို့ ပုဆိုးတစ္ဝက္ေပါင္လည္ေရာက္ေအာင္မ ျပီး ကုန္းရုန္းေအာ္ေနမယ့္အစားအလုပ္ကေလးနဲ႕သက္ေသျပေပးပါ!တစ္သက္လံုး”လူျကမ္း”ဇာတ္ရုပ္မွာ သရုပ္ေဆာင္
ခိုင္းထားေတြရပ္ေပးျပီး “ဇာတ္ပို့”ဘဝေလးေတြျဖစ္ခြင့္ေပးပါေတာ့!ခင္မ်ားတို့ အကယ္ဒမီရ ဆယ္လီဘဝျဖစ္ဖို့အသံုးခ်ခံရတဲ႕ “လူမုန္း”ဘဝက လြန္ေျမာက္ပါရေစေတာ့ဗ်ာ!
ဝတ္ထားတဲ႕အေရာင္ေလးကြဲျပားတာနဲ႕ပဲတစ္လြဲအမွား စိတ္ဓာတ္ေတြနဲဲ႕ တံဆိပ္လာလာ မခတ္ျကပါနဲ႕ဗ်ာ!က်ြန္ေတာ္တို့လဲ ျပည္သူကေမြးတဲဲ ႔ ျပည္သူ့ေသြးေတြပါပဲေလ!နဖူးကေခ်ြးေျခမက်မွ ထမင္းစားရတဲ့က်ြန္ေတာ္တို့နင္းျပားဘဝကို”ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္”ဖို့ မစဥ္းစားျကပါနဲ႕ေတာ့ဗ်ာ!
မလေးစားချင်နေပါဗျာမစော်ကားပါနဲ့ဘယ်သူမှတော့ ပျော်ပါးလို့ စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝရဲဲ့ အလျော်အစားဆိုတာပေးလိုက်ရတဲ့ အသက်တွေနဲ့ အောင်မြင်
လို့ရလိုက်တဲ့စခန်း ကုန်းလေးတွေပါပဲ”ပန်းကုံး”တွေနဲ့မကြိုရင်နေပါ”ယမ်းဗုန်း”နဲ့တူတဲဲစကားတွေနဲ့တော့ မထိုးနှက်ပါနဲ့”အမျိုးဖျက်တဲ့ မျိုးမစစ် တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူး
မြန်မာပြည်ကြီးမတိုးတက်ပါဘူးလို့ ပုဆိုးတစ်ဝက်ပေါင်လည်ရောက်အောင်မ ပြီး ကုန်းရုန်းအော်နေမယ့်အစားအလုပ်ကလေးနဲ့သက်သေပြပေးပါ!တစ်သက်လုံး”လူကြမ်း”ဇာတ်ရုပ်မှာ သရုပ်ဆောင်
ခိုင်းထားတွေရပ်ပေးပြီး “ဇာတ်ပို့”ဘဝလေးတွေဖြစ်ခွင့်ပေးပါတော့!ခင်များတို့ အကယ်ဒမီရ ဆယ်လီဘဝဖြစ်ဖို့အသုံးချခံရတဲ့ “လူမုန်း”ဘဝက လွန်မြောက်ပါရစေတော့ဗျာ!
ဝတ်ထားတဲ့အရောင်လေးကွဲပြားတာနဲ့ပဲတစ်လွဲအမှား စိတ်ဓာတ်တွေနဲဲ့ တံဆိပ်လာလာ မခတ်ကြပါနဲ့ဗျာ!ကျွန်တော်တို့လဲ ပြည်သူကမွေးတဲဲ့ပြည်သူ့သွေးတွေပါပဲလေ!နဖူးကချေွးခြေမကျမှ ထမင်းစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့နင်းပြားဘဝကို”မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်”ဖို့ မစဉ်းစားကြပါနဲ့တော့ဗျာ!
Author admin 1Posted on March 9, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​“ပန္းကုံး”ေတြနဲ႕မျကိုရင္ေနပါ”ယမ္းဗုန္း”နဲ႕တူတဲဲစကားေတြနဲ႕ေတာ့ မထိုးနွက္ပါနဲ႕
​လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို အေထာက္အထားျပဖို႔ ျမန္မာေတာင္းဆို
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြအထိ ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့အေထာက္အထား လိုခ်င္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ Switzerland ႏို္င္ငံ Geneva ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ႏွစ္ပါတ္လည္စည္းေဝးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႔ပါတ္သက္လို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက သတင္းေထာက္ေတြကို ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးစုလိုက္႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားမႈေတြ႐ွိေနတယ္။ လူမ်ဳိးုတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြအထိျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြ မၾကာခဏၾကားေနရပါတယ္။ အရင္ကကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ခုလဲထပ္ေျပာပါမယ္။ ဒါဟာအစိုးရရဲ႕ မူမဟုတ္ပါဘူးဆိုတာကို အေသအခ်ာေျပာခ်င္ပါတယ္။ စြပ္စြဲမႈေတြအတြက္ အေထာက္အထား ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ရခ်င္ပါတယ္။ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အေထာက္အထား ရတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုျပစ္မႈမ်ဳိးကိုမဆို က်ဴးလြန္သူ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔စြပ္စြဲခံရသူေတြကို အေသအခ်ာ အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္။”
အခုအခ်ိန္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္လို႔လည္း သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔အားလံုးထြက္သြားၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက Geneva ၿမိဳ႕မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ August လကုန္ပုိင္းက ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြရဲ႕ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းမႈေတြ အတြင္း လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္တဲ့အထိ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ သူအခုိင္အမာ သံသယေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္နာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad al-Hussein က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တရက္မွာပဲ ျမန္မာအစိုးရဖက္က ႐ွင္းလင္းတဲ့ အေထာက္အထားလိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးန႔ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ပါတ္သက္လို႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီစည္းေဝးပြဲရဲ႕ ေဆြးေႏြးခန္းတခုမွာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ၾကာသပေတးေန႔က ႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ကို အထောက်အထားပြဖို့ မြန်မာတောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေအထိ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အထောက်အထား လိုချင်တယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Switzerland နို်င်ငံ Geneva မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ နှစ်ပါတ်လည်စည်းဝေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ပါတ်သက်လို့ လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက သတင်းထောက်တွေကို ကြာသပတေးနေ့က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်။ လူမျိုးုတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေအထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေ မကြာခဏကြားနေရပါတယ်။ အရင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ခုလဲထပ်ပြောပါမယ်။ ဒါဟာအစိုးရရဲ့ မူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို အသေအချာပြောချင်ပါတယ်။ စွပ်စွဲမှုတွေအတွက် အထောက်အထား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရချင်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အထောက်အထား ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြစ်မှုမျိုးကိုမဆို ကျူးလွန်သူ။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရသူတွေကို အသေအချာ အရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်။”
အခုအချိန်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မွတ်ဆလင်အများစု နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့လည်း သူက ထောက်ပြပါတယ်။ တကယ်လို့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင် သူတို့အားလုံးထွက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက Geneva မြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August လကုန်ပိုင်းက မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေ အတွင်း လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တဲ့အထိ ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ သူအခိုင်အမာ သံသယကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Zeid Ra’ad al-Hussein က လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်တရက်မှာပဲ မြန်မာအစိုးရဖက်က ရှင်းလင်းတဲ့ အထောက်အထားလိုချင်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးန့ဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပါတ်သက်လို့လည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီစည်းဝေးပွဲရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းတခုမှာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ကြာသပတေးနေ့က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Author admin 1Posted on March 9, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို အေထာက္အထားျပဖို႔ ျမန္မာေတာင္းဆို
​ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ “ၿငိမ္းစုစီ” ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲခြဲအတည္ျပဳ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ယေန႔ မတ္လ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၅) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ မဲခြဲရယူခဲ့ရာတြင္ ၾကားေနမဲမရွိခဲ့ဘဲ ေထာက္ခံမဲ (၁၁၃) မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၇၈) မဲတုိ႔ျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဆႏၵျပဖို႔ ေငြေပးေစခိုင္းသူကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ ေငြဒဏ္ပါခ်မွတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားတာျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိး က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္မွာ တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ တင္သြင္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးတုိ႔ကလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။
ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့သည့် “ငြိမ်းစုစီ” ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပေဒကြမ်း အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲခွဲအတည်ပြု
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုေ၀းခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ယနေ့ မတ်လ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအေ၀း (၂၅) ရက်မြောက်နေ့တွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းစုစီဥပဒေကြမ်းအား အတည်ပြုရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကို မဲခွဲရယူခဲ့ရာတွင် ကြားနေမဲမရှိခဲ့ဘဲ ထောက်ခံမဲ (၁၁၃) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၇၈) မဲတို့ဖြင့် အဆိုပါဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းစုစီဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် ဆန္ဒပြဖို့ ငွေပေးစေခိုင်းသူကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ့်အပြင် ငွေဒဏ်ပါချမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) မှ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်မှာ တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ တင်သွင်းသော ငြိမ်းချမ်းစွာ စုေ၀းခြင်းနှင့် ငြိမ်ချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦးတို့ကလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Author admin 1Posted on March 8, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ “ၿငိမ္းစုစီ” ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥေပဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲခြဲအတည္ျပဳ